Myat Shu - အင်တာဗျူး
You are here : Myat Shu » Archives for အင်တာဗျူး
မာဗဲ စူပါဟီးရိုးများဖန်တီးရှင် စတန်လီ နှင့် အင်တာဗျူး
Published By Myat Shu On Sunday, June 24th 2012. Under မျက်ရှု, အင်တာဗျူး
Stan Lee in Incredible Hulk ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင် Incredible Hulk ထဲက ဂမ္မာ ရောင်ခြည်သင့်ထားတဲ့ ဟော့ (Hulk) ရဲ့ သွေးပါတဲ့ဖျော်ရည် သောက်မိလို့ ပုလင်းကြီး လွတ်ကျသွားတဲ့ အဖိုးကြီးကို သတိထားမိမှာပေါ့။ အဲဒီ အဖိုးကြီးဟာ မာဗဲ (Marvel) ရုပ်ပြ ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ X-Men, Spider Men, Wolverine, Thor, Captain America စတဲ့ စူပါဟီးရိုး တွေကို ဖန်တီးမွေးဖွားခဲ့တဲ့ ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းရေးဆရာကြီး စတန်လီ (Stan Lee) ပါပဲ။ အခု အသက် ၈၉ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ် ... Continue Reading
ခေတ်ဝန်ကို ထမ်း၍ ခေတ်လမ်းကို လျှောက်နေသူနှင့် စာပေရေးရာ ခဏတာ တွေ့ဆုံခြင်း
Published By Myat Shu On Monday, October 31st 2011. Under တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု, အင်တာဗျူး
“သတင်းစာသည် ဖျော်ဖြေစာမဟုတ်။ သံတော်ဦးတင်လွှာ မဟုတ်။ အစီရင်ခံစာ မဟုတ်။ ပြည်သူ့ နား မျက်စိကို ကာဆီး ပိတ်ဆို့သော စက္ကူကန့်လန့်ကာ မဟုတ်။ သတင်းစာသည် ပြည်သူတို့၏ အသိဥာဏ် စည်ပင်ပွင့်လင်းမှုတို့ စီးဆင်းရာ မြစ်ကြီးနှင့် အလားတူသည်။” ဤစာသားသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ခန့်က ထုတ်ဝေခဲ့သော “ပြည်သူတို့၏ စကားပြန်” စာအုပ်တွင် ဆရာကြီးဦးဝင်းတင် ရေးသားခဲ့သော “အိပ်မက်ကြိုးမျှင်” ဆောင်းပါးမှ စာသားတစ်ချို့ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းစာ၏ တန်ဖိုးနှင့် သတင်းသမား၏ တန်ဖိုးကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သော “အိပ်မက်ကြိုးမျှင်” မှာ သတင်းသမားများအတွက် မှတ်သားစရာချည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ဦးဝင်းတင်၏ စာအုပ်တချို့ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့်ရခဲ့ရာ စာပေမျိုးဆက်ပြတ်နေသော ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, July 10th 2011. Under အင်တာဗျူး
မကြာသေးမီက စတင်၍ အာရှနိုင်ငံတချို့မှာ ကဗျာအနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတချို့ ပြုလုပ်ခဲ့သူ ကဗျာဆရာစောဝေနှင့် ယနေ့ ကဗျာအနုပညာအမြင်များအတွက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ လတ်တလော ကဗျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ရပ်တည်နေလဲ၊ ဘယ်လို ရှင်သန်လဲ သိချင်ပါတယ်။ အခုတော့ ပေါ်ထရီ Performance ပေါ့။ ဆောင်ရွက်မှု အနုပညာကဗျာပေါ့။ အဲဒါလေးတွေကို ပြင်ပမှာ သွားလုပ်တယ်။ ဥပမာ ထိုင်းတို့၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ စင်ကာပူတို့ပေါ့။ သူတို့က ဖိတ်ခေါ်တာလည်း ရှိတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်အနုပညာကို ပြချင်လို့ request လုပ်ပြီး သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းရတာလည်း ရှိတယ်။ ဒီသုံးနိုင်ငံမှာ စင်ကာပူဆို ပူးပေါင်းပြီး သွားတယ်။ ထိုင်းဆို ဖိတ်ခေါ်တယ်။ ကမ္ဘောဒီးယားမှာကျတော့ ကိုယ်ကလည်း ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ... Continue Reading
အညာလေ တိုက်တဲ့နေ့ (၂)
Published By Myat Shu On Friday, April 22nd 2011. Under အင်တာဗျူး
အညာဒေသရဲ့ ဓလေ့စရိုက်တွေ၊ အယူအစွဲထဲမှာပေါ့.. ခေတ်အမြင်အရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ ပြောင်းလဲပစ်သင့်ပြီ ထင်လဲ။ ဥပမာ အန်တီထူးရယ်… ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုပိုင်းတွေ၊ အယူသည်းမှုတွေထဲကနေ ပြောင်းလဲသင့်တာတွေ ရှိလား။ တခြားနေရာတွေတော့ မသိဘူးပေါ့ သမီးရယ်။ အန်တီထူးတို့ ရွာတွေမှာတော့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ခုထိ လေးလေးနက်နက် ရှိကြတုန်းပဲ။ သူများ မပြောနဲ့။ အန်တီထူး ကိုယ်တိုင် ပြောပြမယ်။ အန်တီထူးတို့ မိဘဘိုးဘွားတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ နယ်တောရှင်၊ ကျေးတောရှင် ပေါက်အိုနတ်ဆိုတာ ရှိတယ်။ အညာသူ အညာသားများထဲမှာတောင် ထည့်ရေးထားသေးတယ်။ ပေါက်အိုနတ်က ဒီနယ်ကို ပိုင်တယ်ဆိုတော့ အန်တီထူး ခုနစ်နှစ်၊ ရှစ်နှစ်ကတည်းက အမေကြီးက လှည်းနဲ့ ခေါ်သွားတာ။ ပေါက်အိုနတ်ကို သွားပြတာပေါ့။ နတ်သွားပြတော့ ... Continue Reading
အညာလေ တိုက်တဲ့နေ့ (၁)
Published By Myat Shu On Tuesday, April 19th 2011. Under အင်တာဗျူး
(၁) အညာချည်ထည် အင်္ကျီ ၀တ်ဆင်ထားပြီး သနပ်ခါး ပါးကွက်ကျားလူးထားသည့် ကွမ်းတမြုံ့မြုံ့နှင့် အညာသူကြီးများကို တွေ့လေတိုင်း ဆရာမ ခင်ခင်ထူးကို သတိရပါသည်။ အညာဓလေ့ ကျွမ်းကျင်လှသူ သူ့လေသံနှင့် ဆိုရလျှင်တော့ "အမလေး တူချက်တော်" ဟု ဆိုရမလောက်ပင် ဆရာမ၏ ဟန်ပန်သည် နာမည်ကြီး စာရေးဆရာမ ဖြစ်နေတာတောင်မှ အညာလေ၊ အညာသံ၊ အညာဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် အညာစိတ်ဓာတ်တို့ ထင်းထင်းကြီး ရှိနေသေးသကိုး။ "ပြောရဦးမယ်အေ့… " သည်လို နိဒါန်းပျိုးလိုက်ပြီဆိုသည်နှင့် ဆရာမ၏ ထွေရာလေးပါး စကားများထဲမှ ဘ၀အမောပြေစရာ၊ သို့မဟုတ် ကျွန်မတို့ မသိသေးသည့် သူ၏ အညာဒေသ အကြောင်းအရာများထဲမှ တခုခု ကြားရတော့မည်ဟု အာရုံရလိုက်သည်။ "ပြီးခဲ့တဲ့ စာပေဟောပြောပွဲတုန်းကပေါ့အေ။ ရွာက တော်တော်ကို ခေါင်တာပါ။ ... Continue Reading
မြန်မာ့ဂီတ၊ မြန်မာသံစဉ်တွေရဲ့ ရှေ့ရေးအနာဂတ် ဘာတွေ ဖြစ်လာကြမလဲ
Published By Myat Shu On Tuesday, March 29th 2011. Under အင်တာဗျူး
လူသားများ ရှင်သန်နေထိုင်ရာ နိုင်ငံတိုင်း၌ ဂီတဆိုသည့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ညွှန်းတဲ့ သံစဉ်တွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဂီတလို့ ဆိုရာမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဂီတ၊ တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဂီတ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဂီတ စသည်ဖြင့် သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန် လို့ပြောလို့ရတဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ညွှန်းတဲ့ ဂီတတွေဟာလည်း နိုင်ငံသားတိုင်း၊ နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။ အဲလိုပဲ မြန်မာ့ဂီတဆိုတာကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက မြန်မာလူမျိုးများဆီ မှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဂီတလို့ဆိုရာမှာ မဟာဂီတသီချင်းကြီးများ၊ ရတု၊ လင်္ကာ၊ တေးထပ်များ ခေတ်ဟောင်းသီချင်း၊ ကာလပေါ် သီချင်းများ၊ စတူဒီယိုခေတ်သီချင်းများ စသည်ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားပါတယ်။ အဲဒD မြန်မာ့ဂီတတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာထဲက လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ... Continue Reading
ခေတ်ပြိုင်ပန်းချီ လမ်းကြောင်းပေါ်က ပုံရိပ်များရှင်
Published By Myat Shu On Friday, March 25th 2011. Under အင်တာဗျူး
အဲဒီနေ့တုန်းက မိုးတွေ သည်းသည်း မည်းမည်း ရွာချနေပါတယ်။ ညအချိန် ရောက်ပြီဆိုတော့ ကျောက်ဂူနား တစ်ဝိုက်မှာ အမှောင်ထုက ပိန်းပိတ်ဖုံးနေလေရဲ့။ ကျောက်ဂူထဲမှာလည်း စိုထိုင်းထိုင်းနဲ့။ ဂူအမိုး ကျောက်သားပြင်မှာ ယီးလေးခိုစီးနေတဲ့ ရေငွေ့တွေက ကျောက်သား ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို တစ်စက်ပြီး တစ်စက် ကျနေတယ်။ အောက်သိုးသိုး အနံ့တွေနဲ့ အတူ ကလေးတွေကလည်း ငိုနေလေရဲ့။ ပုပ်သိုးစပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ အသားစိုင်တွေ၊ အရိုးမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ အသားစတွေကို မက်မက်စက်စက် ပွဲတော်တည်နေတဲ့ ယင်မမဲရိုင်း တစ်အုပ်ကလည်း တ၀ီဝီ အသံပြု နေတယ်။ မိုးကလည်း သည်းလိုက်တာ လွန်ရော။ ဒီနေ့ပါဆိုရင် မိုးရွာတာ ခုနစ်ရက်၊ ခုနစ်လီရှိပြီ။ ဘယ်တော့များမှ တိတ်မှာလဲ မိုးမင်းကြီးရယ်။ အမှောင်ထုက ပိန်းပိတ်ဖုံး၊ ... Continue Reading